Ukupaka pike kuhhavini kungaba ngezindlela ezahlukene ngokuphelele. Namuhla sizocabangela indlela elula futhi elula ukuthi ngisho nompheki ongenalwazi angasebenzisa. Lesi sidlo kufanele sikhululwe etafuleni ngesidlo esikhulu sezinhlangothi (kunconywa ukupheka ngokwehlukana nezinhlanzi).
I-step-by-step recipe ye-pike ebhaka kuhhavini
Imayonnaise encane yamafutha fat - 230 g;
Amakhulu amakhulu - ama-2 ama-pcs.;
I-pike emisha enkulu - i-1 pc ye-3-5 kg;
Isikhathi sokudla ukudlala i-grill - i-spoon 1 encane (engeza ukunambitha);
Izinongo zezinhlanzi - izinkezo ezincane ezigcwele ezimbili;
Ilamula elikhulu elivuthiwe - izithelo eziyi-1;
I-iodizedi sosawoti - engeza ekuhlakanipheni;
I-pepper enombala omnyama - 2/3 we-spoon spoon.
Inqubo yokulungiselela izinhlanzi ezintsha
Ukuze ubhake i-pike esiphundu kuhhavini, kufanele wenze umzamo omkhulu ukuwuqeda. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi uthenge izinhlanzi ezintsha nezinhlanzi, ugeze ngokugcwele, uhlanzeke esikalini, ugundane, futhi ususe ikhanda, umsila kanye nezinhlawulo. Ngemuva kwalokho, i-pike kumele ihlukaniswe ngezigaba ezinkulu. Izitshalo kufanele zibe ngu-2-3 cm obukhulu. Ngakho-ke bayothatha amanzi amaningi futhi banomsoco.
Inqubo yokulungiselela i-Marinade
Ngaphambi kokubhaka i-pike kuhhavini, kunconywa ukuthi uyifake emanzini awenziwe. Ngenxa yokuthi inhlanzi enjalo yemifula ine-fat content content, kungcono ukwenza isoso elimnandi kusuka kumayonnaise. Ukuze wenze lokhu, udinga ukucima ama-bulb bese uwabhoqa ku-grater enkulu. Ukucubungula okunjalo imifino kuzonikeza isidlo ukunambitheka okukhulu kakhulu kanye nephunga elingenakuqhathaniswa. Emva kwalokho, u-anyanisi o-anyanisi kufanele uxubaniswe kanye nemayonnaise, kanye nokuphunga ukudla, izinongo zezinhlanzi, usawoti onobuciko kanye nomshuzi omnyama omnandi. Ngaphezu kwalokho, ku-marinade kuyadingeka ukuthulula ijusi elisha elifakwe kusuka kulamula eyodwa enkulu.
Ngemuva kokulungiswa kwe-sauce enamafutha kuyadingeka ukuba uyibeke ezinhlathini ezinkulu zezinhlanzi bese uzixuba ngokugcwele ngezandla. Ku-pike esiphundu futhi enelisayo ebhawini, kunconywa ukuthi uyifake emanzini ase-marinade cishe ihora elilodwa.
Ukuze ubhake isidlo esinjalo, kufanele uthathe i-tray enkulu yokubhaka uphinde umboze ubuso bawo ngesikhumba esiphansi. Ngaphezu kwalokho kubalulekile ukubeka zonke izingcezu ezinhlanzi ezixubile kanye ne-mayonnaise marinade. Phezulu kwesidlo akufanele kuvaliwe. Ngemuva kwalokho, nje kuphela uzothola ukudla kwasemini okuthosiwe namanzi.
Ukuze ulungise isidlo esinjalo senhlanzi kuhhavini, uzodinga ihora elilodwa kuphela. Ngalesi sikhathi i-pike izobekwa kahle, iyoba yiphunga, iphunga elimnandi futhi elithambile. Kunconywa ukuthi uyisuse emgodini nge-spatula enkulu yensimbi.
Indlela yokukhonza etafuleni ngendlela efanele
I-Pike, ebhaka kuhhavini, isithombe ongabona kuso kulesi sihloko, sinikelwa ekudleni komndeni kuphela esimweni esishisayo. I-fish steak egciniwe ephethwe kufanele ipheliswe epulatifeni elithambile, futhi eduze nendawo indawo yokuhlobisa. Isixazululo esihle salokhu singasebenza njengamazambane ochotshoziwe noma ilayisi elibilisiwe elihlanganiswe no-anyanisi obunandi nama-izaqathe. Futhi izinhlanzi ezibhakawayo kuyadingeka ukukhonza isinkwa, imifino nemifino eluhlaza.
Ama-Bagels we-puff pastry - ukunambitheka kobuntwana
Kungani isidingo idiski ukubopha